डा. शेरबहादुर पुनलाई दुई वर्षपछि फेरि तनाव दिने त्यो फेसबुक पोस्ट – MySansar
डा. शेरबहादुर पुनलाई दुई वर्षपछि फेरि तनाव दिने त्यो फेसबुक पोस्ट
Posted on April 24, 2022 by Salokya
मन्त्री र सचिवलाई गाली गरिएको एउटा पोस्ट अहिले फेसबुकमा भाइरल भएको छ जसमा लेखिएको छ, ‘मरी मरी पढेर डाक्टर बन्यो,स्थायी बन्न दशतिर चाकरी ठोक्नुपर्छ, करारमा बसेर काम गर्‍यो, अनि साँचो बोल्यो भनेर चोरेर बीए पास गर्ने मन्त्रीले थर्काउँछ, नेपाली घोकेर सचिव बन्नेहरुले पेल्छन्, अनि कोही कसरी नेपालमा टिकुन्।’ पोस्टमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च यूनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनको नाम र फोटो सँगै हाम्रो पार्टी र धारा चिह्नसहितको लोगो पनि राखेको देखिन्छ। यो विषयमा नेपाल फ्याक्ट चेकले गरेको तथ्य जाँच छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। खासमा हाम्रो पार्टी नामको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष नै खारेज गरिसकेको दलको फेसबुक पेजमा दुई वर्ष पहिले राखिएको यो पोस्ट अहिले फेरि भाइरल भएर भ्रम फैलाइरहेको रहेछ।
फेसबुकमा चार लाखभन्दा बढी फलोअर भएको हाम्रो पार्टी नाम रहेको पेजमा १९ अप्रिल २०२० मा ‘डा. शेरबहादुर पुनको व्यथा’ लेख्दै यसलाई पोस्ट गरिएको थियो। हेर्नुस् लिङ्क।
यो पोस्टमा बुधबार रातिदेखि नयाँ कमेन्टसहितको सेयर, रियाक्सन लगायतका इन्गेजमेन्ट भएको देखिन्छ।
दुई वर्षअघि पनि भाइरल भएको यो पोस्ट पछिल्लो दुई दिनमा धेरैले सेयर गर्ने, रियाक्ट गर्ने र कमेन्ट गर्ने क्रम बढेपछि फेरि भाइरल हुन पुगेको हो। शनिबार दिउँसोसम्म यो पोस्टमा २१ सय रियाक्सन, १३८ कमेन्ट र २ हजार सेयर भएको देखिन्छ।
यो पेज आफूलाई ‘भ्रष्टाचार विरोधी समूह’ दावी गर्ने निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टी नाममा दर्ता भएको राजनीतिक दलले सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नै नबुझाएको भन्दै आयोगको २०७८ साउन १९ गतेको बैठकले भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी योसहित ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। हेर्नुस् आयोगको सूचना।
तथ्य के हो ?
डा. पुनले शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा सोही विवादित पोस्टको स्क्रिनसट राख्दै आफूले भन्दै नभनेको कुरामा आफ्नो नाम र फोटो राखी प्रचार भइरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखेका छन्।
डा. पुनले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा यस्तो अभिव्यक्ति कहीँ कतै नदिएको दावी गरेका छन्। ‘म आफ्नो विषय विज्ञता बाहेक अरु विषयमा कहीँ कतै केही भन्ने मानिस होइन, म आफ्नो काममा रमाइरहेको छु । तर, पुरानो सन्दर्भलाई लिएर भन्दै नभनेको कुरा भाइरल गराउदाँ मेरो पेशामा असर पर्ने भएकाले चिन्तित छु” हिमालखबरले डा. पुनलाई उद्‍धृत गर्दै लेखेको छ।
हामीले खोज्ने क्रममा पनि डा. पुनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अडियो, भिडियो वा कुनै समाचार समेत फेला भेट्न सकेनौँ। त्यसो त भाइरल भएको फेसबुक पोस्टमा पनि यो उनले नै भनेको हो कि हैन- स्पष्ट देखिन्न। तर डा. पुनकै फोटो राखेर उनको व्यथा लेखिएको हुनाले धेरैले यसलाई उनले नै बोलेको भन्ने अर्थमा बुझेको कमेन्ट र सेयर गर्नेहरुको भाषाबाट देखिन्छ।
पुरानो सन्दर्भ के थियो?
जतिबेला यो पोस्ट पहिलो पटक भाइरल भएको थियो, त्यतिबेलाको सन्दर्भ बेग्लै थियो। त्यतिबेला केपी ओलीको सरकार थियो। स्वास्थ्य मन्त्री भाउयनुभक्त ढकाल थिए भने स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला थिए।
२०७७ वैशाख ५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले टेकु अस्पतालमा कार्यरत डा. पुनलाई पत्र काट्दै अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड १९ मा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने काममा लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा भने कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो भ्रम फैलाएको तथा सूचना चुहाएकाले कारवाही गरिएको भन्ने आशयका समाचार आएका थिए।
यस्तो समाचारका कारण तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको चौतर्फी विरोध भएपछि वैशाख ७ गते डा. पुनले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई भेटे। उक्त भेटपछि डा. पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले कारवाही गरेको तथा स्ष्पष्टीकरण सोधेको विषय झुटो भएको दावी गरेका थिए।
अनलाइनखबरले त्यतिबेलाको यो प्रसङ्गलाई डा. शेरबहादुर पुन ‘होस्टाइल’ भएकै हुन् ? अघिल्लो दिनसम्म आफूलाई ‘भिक्टिम’ बताउने डाक्टरको बयान फेरियो शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो।
दावी : डा. शेरबहादुर पुनले ‘मरी मरी पढेर डाक्टर बन्यो,स्थायी बन्न दशतिर चाकरी ठोक्नुपर्छ, करारमा बसेर काम गर्‍यो, अनि साँचो बोल्यो भनेर चोरेर बीए पास गर्ने मन्त्रीले थर्काउँछ, नेपाली घोकेर सचिव बन्नेहरुले पेल्छन्, अनि कोही कसरी नेपालमा टिकुन्’ भने।
तथ्य : भ्रामक सूचना। डा. पुनले फेसबुकमा भाइरल भएको पोस्टमा दावी गरिए जस्तो अभिव्यक्ति दिएको कुनै अडियो, भिडियो वा विश्वसनीय मिडियामा आएको समाचार देखिन्न। यो पोस्ट पनि अघिल्लो सरकारका पालामा मिडियाले दावी गरेको ‘कारबाही’ को पुरानो सन्दर्भलाई लिएर पुरानै भएको हाम्रो तथ्य जाँचमा देखिन्छ। तसर्थ डा. शेरबहादुर पुनको अपुष्ट पुरानो सन्दर्भको अभिव्यक्तिलाई नयाँ सन्दर्भमा भाइरल गरिएकोले यसलाई हामीले भ्रामक सूचनाको वर्गीकरणमा राखेका छौँ।
हाम्रो तथ्य जाँच वर्गीकरणको अर्थ बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
तथ्य जाँच बाहेक एउटा थप कुरा पनि,
भ्रामक सूचना भाइरल, खण्डन लिमिटेड
हाम्रो पार्टी नामको फेसबुक पेजबाट दुई वर्षपछि पुनः यो पोस्ट भाइरल भए पनि डा. शेरबहादुर पुनको खण्डन पोस्ट भने त्यसको तुलनामा कमै फैलिएको छ। हुनत एउटा भनाई नै छ- सत्यले जुत्ता लगाउँदै गर्दा झुटले आधा विश्वको यात्रा गरिसकेको हुन्छ। त्यसो त यो भनाई नै कसको हो भन्नेमा भ्रम छ। धेरैले यसलाई मार्क ट्वेनको भनाई भन्ठान्छन्। तर यो खासमा जोनाथन स्विफ्टको भनाई हो भनेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
डा. शेरबहादुर पुनको खण्डन पोस्ट नफैलिनुको एउटा कारण हो- उनको पोस्टको तरिका। उनले फेसबुकमा अरुले ट्याग गरेका पोस्ट आफ्नो टाइमलाइनमा देखिने त बनाएका छन्, तर आफ्नै पोस्ट भने फ्रेन्डस् वन्ली बनाएका छन्। अर्थात् डा.पुनको साथी सूचीमा नभएका कसैले पनि उनले लेखेको त्यो पोस्ट हेर्न पाउँदैनन्।
खासमा उनले यस्तो पोस्ट पब्लिक गर्नुपर्थ्यो। त्यो भयो भने सबैले हेर्न पाउँथे।
पुरानो पोस्टलाई नयाँ भन्ठानेर नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव वा उनका आसेपासे रिसाए अनि उनको फेसबुकमा खोजे भने पनि खण्डन नदेखिने स्थिति पो देखियो त यसबाट।
हामीलाई निम्न माध्यमबाट पनि शंका लागेका सामग्री पठाउन सक्नुहुन्छ-